Madaxweyne Farmaajo “Xuska maalmaha gobonimada waxa uu na barayaa in aan dhisan karno mustaqbal qurux badan”. – Hornafrik Media Network
Madaxweyne Farmaajo “Xuska maalmaha gobonimada waxa uu na barayaa in aan dhisan karno mustaqbal qurux badan”.
By HornAfrik	 On Jul 1, 2018
Hornafrik-Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska sannad-guurada 58-aad ee ka soo wareegtay markii ay xoroobeen Gobollada Koonfureed iyo israacii labada qeybood ee dalka, taasoo asaas u noqotay curashada Jamhuriyadda Soomaaliya.
Arday Soomaali ah oo lagu xiray dalka Turkiga, ogow sababta.
Yaa ka danbeeyay sii deynta Qalbi dhagax.